MY Welcome Guide – SOM
Dari (Laga soo bilaabo)
Haddii aanan fiicneyn
Maalin walba dad dhalinyara ah ee ka socdo wadamo kala duwan ee daafaha caalamka waxay u dhammaadaan Boosteejada Tareenka Munich Main. Waxay ka ogyihiin wax aad u yar wadankeena iyo waxa iyaga ku sugayo halkaan. Marka laga reebo mida laga yaabo inay wax yar wanaagsan ku sameeyaan halaan badelkii wadankooda hooyo.
Inta badan ma hubaan sida loogu dhaqmo deegaankooda. Aragti badan way cusubyihiin oo magaranayaan iyaga. Waxay ku wajahaan ku meelgaarka, sida wadada hoose, oo ay la jiraan mashiinka tikidka.
Isla sidaas waxay aadaa xayeysiin, taas oo ay kula kulmaan gees walba iyo mida aysan fahmin ama ay la jiraan xeerarka, oo aysan fahmi karin.
Waxyaabo badan waxaa loo sharciyeeyay si ka duwan wadamadooda asalka ah iyo nolol maalmeedka inta badan waxaa lagu go’aansaday muhiimadaha kale. Waaya aragnimadooda hore way ku adkeen kartaa dadka dhalinyarada si ay u helaan wadadooda agagaarka jawigaan cusub.
HADAFKA JAHEYNTA SOO DHAWEYNTA
Oo ay la jirto MY-WelcomeGuide, labadaba dhaliinta iyo carruurta leh waaya aragnimada qaxootiga waxaa lagu siinayaa tallooyinka fiidiyow gaaban ee sida lee helo wadadooda u dhow deegaankooda cusub. Fiidiyayaashaan waxaa loogu talogalay inay midkood ahaato taxadar, ama xakameynta.
Ujeedada mashruuca waa siinta tallooyinka imaanshaha bilowga cusub ee sida wanaagsan ee halkaan looga bilaabo. Hadafka guud waa tusiinta dhalinyarada suurtogalnimada ka soo kabsiga nolol maalmeedka iyo fursadaha ka qeybqaadashada bulshadeena.
Mashruuca waxa loo naqshadeeyay qaabka dadka dhalinyarada ee leh iyo aan laheyn waaya aragnimada qaxootiga ee soo saara fiidiyowyada soo dhaweynta si firfircoon uga qeybqaadato heerarka oo dhan. Waxay si weyn uga qeybgalaan labadaba doorashada mowduucyada, sidoo kale sida ogaanshaha fiidiyowyada. Tani waxay damaanad qaadaa in mowduucyada aad ugu dhowyihiin baahiyada qaxootiyada ee imaado halkaan Munich.
Waxaa taageero macalimiinta warbaahinta ee Xarunta Warbaahinta Munich JFF - Manhajka Waxbarashada Warbaahinta ee cilmi baarista iyo dhaqanka sidoo kale sida guddiga la talinta ee wakiilada hay’ado kala duwan iyo machadyada bulshada ee ka imaanayo goobta shaqada isdhaxgalka dhaqanka.
Guddiga la talinta wuxuu matalaa sida wakiilka la tashiga ee doorashada mowduucyada sidoo kale sida ogolaanshaha fiidiyaha, si loo hubiyo in tusmada la gaarsiiyay au sidoo kale inay xor ka tahay fasiraada qaldan ee suurtogalka ah.
MOWDUUCYADA JAHEYNTA SOO DHAWEYNTA
Fiidiye walba waxaa lagu dhisay isla jadwalka aasaaska si markaas loogu aqoonsado sida MY-WelcomeGuide oo si sahlan qof walba u fahmo.
Fiidiye walba ugu badnaan waa 3 daqiiqo dhirirka oo waxaa laga heli karaa bogga www.MY-WelcomeGuide.de iyo YouTube ee kanaalka MY-WelcomeGuide.
Mowduuc walba, noocyada luuqad ka duwan waxaa lagu fasiray caawinta dadka dhalinyarada. Tusaale ahaan, waxaa jiro fiidiyowyo af Ingiriis ah, Faransiis ah, Dari, Carabi, Soomaali, iyo af Jarmal. Intaa waxaa dheer, fiidiyowyada waa la naqshadeeyay si markaas ay u fahmaan si aan hadal aheyn.
Fiidiyowyo badan waxaa lagu aasaasay mowduucyo kala duwan ee qaabkaan, taas oo laga aruuriyay websaydka www.MY-WelcomeGuide.de oo lagu diyaariyay qaabka racfaanka iyo warbixinta.
NAQSHADA JAHEYNTA SOO DHAWEYNTA
Fiidiyaha waxaa loo naqshadeeyay inay ogeysiiso oo ay u maaweeliso qaab madadaalo ah sidoo kale waxaa loo heli karaa shaqada xisbiyada xiiseynayo, abaabulada, iyo machadyada si markaas ay ugu suurtogasho iyaga inay u isticmaalaan gaar ahaan dhacdooyinka iyo howlaha la tashiga. Maamulka mashruuca wuxuu ku yaalaa Xarunta Warbaahinta Munich JFF.
Fiidiyaha waxaa si shaacsan oo xor ah loogu heli karaa qof walba ee websaydka loogu talogalay www.MY-Guide WelcomeGuide.de oo dabcan sidoo kale dib ayaa loo qeybin karaa.